Vaovao - Fampidirana momba ny piston
Ny motera dia toy ny 'fon'ny' fiara ary ny piston dia azo adika ho toy ny 'afovoany pivot' an'ny motera. Ny atin'ny piston dia endrika tsy misy lavaka izay tia satroka, ny lavaka boribory amin'ny tendrony roa dia ampifandraisina amin'ny paingotra piston, ny paingotra piston dia mifandray amin'ny tendrony kely amin'ny tehina mampifandray, ary ny faran'ny lehibe amin'ny tehina mifandray dia mifamatotra amin'ny crankshaft, izay mamadika ny fihetsiky ny piston amin'ny piston mankany amin'ny boribory boribory.
Ny fepetra miasa
Ny fiasan'ny piston dia tena ratsy. Ny pistons dia miasa eo ambanin'ny mari-pana avo, ny tsindry ambony, ny hafainganam-pandeha ary ny toe-javatra mahasosotra. Ny piston dia mifandray mivantana amin'ny lasantsy avo lenta, ary ny hafanana eo noho eo dia mety hahatratra 2500K mahery. Noho izany, mafana be ny piston ary mahantra tokoa ny fiparitahan'ny hafanana. Vokatr'izany dia miasa amin'ny hafanana avo be ny piston, miaraka amin'ny ambony mahatratra 600 ~ 700K, ary ny fizarana mari-pana dia tena tsy mitovy.
Ny tampon'ny piston dia mitondra tsindry entona lehibe, indrindra mandritra ny fiasa, izay mahatratra 3 ~ 5MPa ho an'ny motera lasantsy ary 6 ~ 9MPa ho an'ny motera diesel. Izany dia mahatonga ny pistons mamokatra fiantraikany ary mitondra ny vokatry ny tsindry amin'ny lafiny. Ny piston dia mihetsika mandroso sy miverina ao anaty varingarina amin'ny hafainganam-pandeha (8 ~ 12m / s), ary miova tsy tapaka ny hafainganana. Izany dia miteraka hery inersia lehibe, izay mahatonga ny piston iharan'ny enta-mavesatra fanampiny. Ny fiasa ao anatin'ireny toe-javatra henjana ireny dia mahatonga ny piston hiova endrika sy hahatonga ny rovitra sy ny ranomason'ny piston haingana, ary koa ny famoahana enta-mavesatra fanampiny sy ny fihenjanana amin'ny hafanana ary iharan'ny entona simika ataon'ny entona. Pistôna iray manana savaivony 90 mm, ohatra, dia mahazaka tsindry telo taonina eo ho eo. Mba hampihenana ny lanja sy ny hery inersia, ny piston amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny firaka aliminioma, namboarina ny piston sasany izay mahatonga azy ireo ho matanjaka sy maharitra.
Afa-tsy ny toe-pahasalaman'ny mpiasa, io dia iray amin'ireo be mpampiasa indrindra ao amin'ny motera. Ny tampony, ny lohan'ny varingarina ary ny barilan'ny varingarina dia mandrafitra ny efitrano fandoroana. Ary izy io koa dia mitana anjara toerana amin'ny fokaohana, famohana ary famoahana entona.
Ny piston tsirairay dia misy ketrona telo amin'ny fametrahana peratra rivotra roa ary peratra solika ary peratra rivotra no eo an-tampony. Mandritra ny fanangonana azy, ny lohan'ny vava vola roa dia tokony hikorontana mba hamehezana. Ny tena asan'ny peratra solika dia ny manaisotra ny menaka be loatra izay voafafa amin'ny rindrina varingarina ary mampitovy azy. Amin'izao fotoana izao, ny fitaovana be mpampiasa amin'ny peratra piston dia misy vy metaly volondavenona, vy fantsom-by, vy vy ary sns.
Ankoatr'izay, noho ny toerana samihafa an'ny peratra piston, dia hafa ihany koa ny fitsaboana amin'ny tany. Ny ivelany ivelany amin'ny kavina piston voalohany dia matetika no fitsaboana plastika vita amin'ny chrome na molybdenum, indrindra mba hanatsarana ny fanosorana sy ny fanoherana. Ny peratra piston hafa dia matetika nopetahany takela-by na phosphate hanatsarana ny fanoherana ny akanjo.